Ny fampiharana an'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ny Apple Watch dia hanana katalaogin'ny fampiharana amin'ny fandefasana azy noho ny ezaky ny Apple sy ny developer satria izany no izy. Ireo rindranasa lehibe dia efa vonona ny fanitarana ho an'ny famantaranandro Apple, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo tanjany lehibe sy ny tsy fitoviana lehibe amin'ireo sehatra misy hafa. Fa ahoana ny amin'ireo rindranasan'ny Apple Watch? ¿Inona no azontsika atao miaraka aminy vaovao avy ao anaty boaty? Atorinay anao ireo rindranasa efa napetraka mialoha ao amin'ny Apple Watch sy ny asany.
1 Hafatra, telefaona ary mailaka
2 Kalandrie, hetsika ary fanatanjahan-tena
3 Sarintany, Passbook ary Siri
4 Mozika, Remote fakan-tsary ary lavitra
5 Fotoana, kitapo ary sary
6 Fanairana, Stopwatch ary famantaranandro
7 Famantaranandro sy famantaranandro
Hafatra, telefaona ary mailaka
Ny andry telo amin'ny fifandraisana amin'ny finday avo lenta dia hita ao amin'ny Apple Watch. Ny famaliana antso an-tariby avy amin'ny Apple Watch anao noho ny mpandahateny sy mikrônona ao aminy, ny fandavana ny antso na ny fampanginana azy fotsiny amin'ny fanakonana fotsiny ny famantaranandro amin'ny tanana iray dia ireo asa izay avelan'ny Apple Watch antsika. Ny fampiharana Messages dia hahafahantsika mahita ireo hafatra, valio izy ireo amin'ny famantaranandro amin'ny alàlan'ny baiko na hafatra am-peo, na koa mandefasa emoji mihetsika. Ny mailaka dia ho voafetra kely kokoa, ary hamela antsika hamaky ireo mailaka, hitahiry azy ireo, hanisy marika azy ireo na hanisy marika azy ireo ho vakiana sy tsy mbola novakina.
Kalandrie, hetsika ary fanatanjahan-tena
Ny fangatahana kalandrie dia hahafahanao mahita ireo fanendrena anao ankehitriny sy fotoana hotanterahinao. Handray fampandrenesana miaraka amin'izy ireo ianao tsirairay avy ary rehefa mahazo fanasana ianao, izay azonao ekena na holavinao avy amin'ny Apple Watch aza. Ny hetsika dia ny fampiharana hanaraha-maso ny zavatra nataonao tontolo andro: ny hetsika, ny fotoana fampihetseham-batana ary ny fotoana nijoroanao. Rehefa efa nipetraka ela loatra ianao dia hampahatsiahy anao izany. Ny fampihetseham-batana dia hampiasaintsika rehefa manao fanazaran-tena isika ary mampiseho angon-drakitra mivantana toy ny kaloria may, ny halaviran-dàlana na ny tahan'ny fony. Azonao atao ny misafidy amin'ireo fanazaran-tena samy hafa izay misy ny matetika matetika: mandeha, mihazakazaka ary mandeha bisikileta.
Sarintany, Passbook ary Siri
Ny fahazoana ny lalana mankany amin'ny alehanao dia ho mora kokoa noho ny hatramin'izay noho ny Maps. Manomboka amin'ny toe-javatra misy anao izao dia azonao atao raiso ny torolàlana isan-tsokajiny momba ny fomba ahatongavana any amin'izay alehanao. Misaotra ny satro-boninahitra, ny zooming dia tena mora. Passbook no hitahiry ny tapakilao, pass pass, sns. Ary afaka miditra amin'ny seho sy fiaramanidina ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny famantaranandronao fotsiny. Siri dia te hateraka indray amin'ny Apple Watch. Ny fahazoana miditra bebe kokoa dia fotoana tsara hanampian'ny Apple mpanampy anao amin'ny asanao isan'andro indrindra.
Mozika, Remote fakan-tsary ary lavitra
Afaka milalao mozika avy amin'ny Apple Watch anao ianao amin'ny alàlan'ny headset bluetooth noho ny fitehirizana 2GB azonao atokisana ho an'ity. Mazava ho azy fa azonao fehezina ny playback, ary azonao atao koa ny mitendry ny mozika anananao amin'ny iPhone anao, na dia amin'ity tranga ity aza dia tsy maintsy entinao miaraka aminao izany. Ny fakana sary dia ho mora tokoa noho ny fampiasa Camera Remote izay manome anao koa dia hanolotra topy maso azy mba hamolavola tanteraka ny zava-drehetra. Ary i Remote dia hahafahanao mifehy ny Apple TV na ny tranomboky iTunes amin'ny Mac na PC-nao.
Fotoana, kitapo ary sary
Ny toetrandro, satria tsy azo atao amin'ny fomba hafa, dia hanolotra fampahalalana momba ny toetr'andro ankehitriny sy ny toetrandro mandritra ny tontolo andro. Miaraka amina endrika tena izy, toy ny famantaranandro, afaka mahita ny vinavina isan'andro amin'ny alàlan'ny sary masina ianao. Miaraka amin'ny kitapo iray dia tsy halahelo anao na inona na inona momba ny tsenan-tahiry ianao, ary amin'ny sary dia azonao aseho amin'ny namanao ny sarin'ny fianakavianao eo amin'ny efijery kely amin'ny Apple Watch raha mijanona kosa ny iPhone 6 Plus miaraka amin'ny efijery Retina FullHD 5,5-inch. ao am-paosinao.
Fanairana, Stopwatch ary famantaranandro
Ny famantaranandro mandroso toy izany dia tsy azo raisina ho toy izany raha tsy manana fanairana, famantaranandro ary famantaranandro, asa tena ilaina izay tsy nohadinoin'i Apple.
Hofaranantsika amin'ny fampiharana World Clock, izay azontsika atao fantaro ny fotoana any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao ary ny fampiharana Settings, izay ahafahantsika manamboatra ireo fiasa tena ilaina ao amin'ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Fampiharana Apple Watch
iTunes dia nohavaozina amin'ny kinova 12.1.2 manampy fanampiana ho an'ny fampiharana sary sy fanatsarana hafa